काे थियो गौचनको हत्यारा ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काे थियो गौचनको हत्यारा ?
आश्विन २५, २०७४ जनकराज सापकोटा
काठमाडौं — नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्याको एक दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले अपराधीबारे कुनै सुइँको पाउन सकेको छैन । सोमबार दिउँसो घरबाट गाडी चढेर निस्केका गौचनको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
गोली हानेलगत्तै दुई युवा मोटरसाइकल चढी बेपत्ता भएका थिए ।
असुली धन्दामा सक्रिय गुन्डा समूहबाट चन्दा नदिएको निहुँमा हत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि हत्याको विन्दुसम्म पुग्नुअघि समूहले गौचनलाई कसरी सताएको थियो भन्नेबारे प्रहरीले पत्तो पाएको छैन । गुलाबी रंगको टिसर्ट र हेल्मेट लगाएका अधबैंसे युवाले हत्या गरेको भन्ने सूचनाबाहेक अपराधीबारे कुनै जानकारी छैन । प्रहरीले गौचनको मोबाइल संवाद र एसएमएस डिटेल केलाएर घटनामा कसको संलग्नता थियो भनेर पत्ता लगाउने प्रयास थालेको छ ।
गौचनको हत्या भएकै साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालय र महानगरीय प्रहरी कार्यालयले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान समिति गठन गरेका थिए । प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी शेरबहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अनुसन्धान टोली बनाएको थियो । महानगरीय प्रहरीले पनि महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय नै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर त्यसको भोलिपल्टै प्रधान कार्यालयले उक्त घटनामाथि अनुसन्धान गर्न भन्दै डीआईजी गणेश केसीको नेतृत्वमा अर्को विशेष टोली गठन गरेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ २०:५३
डा. केसीको स्वास्थ्य खस्कँदो
छाती दुखाइ बढ्यो, मुटुको चाल बिग्रन सक्ने त्रास
१३ पटक गरी मंगलबारसम्म १५२ दिन अनशन बसिसकेका छन् डा. केसी
आश्विन २४, २०७४ अतुल मिश्र
काठमाडौं — डा. गोविन्द केसीको छाती दुखाइसँगै स्वास्थ्य अवस्था खस्कन थालेपछि मंगलबार अनशनस्थलमा मनिटरलगायत थप चिकित्सकीय उपकरण लगाइएको छ । अघिल्ला अनशनको दाँजोमा यस पटक केसीको स्वास्थ्य अवस्था तीव्र गतिले खस्कँदै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
‘परिस्थितिको संवेदनशीलताअनुसार मंगलबारदेखि मनिटरका माध्यमले उनको स्वास्थ्यस्थिति प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न थालिएको छ,’ डा. केसीको स्वास्थ्य निगरानीमा सरिक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘मनिटरले प्रत्यक्ष रूपमा डा. केसीको मुटुको चाल र गतिविधि, रगतमा अक्सिजनको मात्रा, श्वासप्रश्वास गतिलगायत जानकारी दिइरहेको छ ।’ विगतका अनशनहरूको दाँजोमा यस पटक स्वास्थ्यस्थिति छिटोछिटो गिर्दो क्रममा देखिएको उनले जानकारी दिइन् । शाहका अनुसार कम समयमै धेरै पटक अनशन बसेका कारण स्वास्थ्यस्थिति छिटो खस्कन थालेको हुन सक्छ ।
डा. केसीले मंगलबार छाती दुखेको बताएपछि उनको स्वास्थ्य निगरानीमा रहेका चिकित्सकहरूमा चिन्ता छाएको छ । ‘छाती दुखाइको लक्षणले मुटुको चाल बिग्रन सक्ने आंशका बढेको छ,’ डा. शाहले भनिन्, ‘हामीलाई यही समस्याले सबभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको छ ।’
सातौं अनशनका क्रममा डा. केसीमा मुटुको समस्या (भेन्ट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया) देखिएको थियो । लामो समयसम्म त्यस्तो समस्या देखिए मुटुले काम गर्न छाड्ने (कार्डियाक एरेस्ट) समस्या निम्तिन सक्ने चिन्ता उनीहरूको छ । आठौं अनशनमा समेत उनमा मुटुको असामान्य चाल (इरेगुलर बिट) को समस्या देखिएको थियो । त्यतिबेला पनि भेन्ट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया हुने चिन्ता चिकित्सकहरूमा थियो ।
मिर्गौला आदिको स्वास्थ्यबारे अनुमान गर्न सकिए पनि मुटुबारे केही भन्न नसकिने उल्लेख गर्दै डा. शाह भन्छिन्, ‘धेरै पटकका लामो अनशनले गर्दा स्वास्थ्य जटिलता बढदै जानुका साथै पहिला नदेखिएका समस्यासमेत थपिन थालेको छ ।’ डा. केसीको शरीरमा अक्सिजन, इलेक्ट्रोलाइट, सेतो रक्तकणिका, क्याल्सियम फस्फोरस आदिको कमी हुने समस्यासमेत देखिएको छ । रक्तचाप कम हुन थालेपछि उनलाई स्लाइन पानी दिन थालिएको छ ।
डा. केसी १३ पटक गरी मंगलबारसम्ममा एक सय ५२ दिन अनशन बसिसकेका छन् । उनको ११ औं अनशन सबभन्दा बढी २३ दिनसम्म चलेको थियो ।